Igumbi leNxusa elikwisikwisikwere esiyimbali i-Iola - I-Airbnb
Igumbi leNxusa elikwisikwisikwere esiyimbali i-Iola
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguJonathan
Eli gumbi lihle lihleli kumantla wesikwere kwaye libheke i-bandstand apho iqela lentsapho liye lenza iikonsathi iminyaka eyi-150. Umgama okufutshane nevenkile yekofu, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, iivenkile zokutyela ezimbini kunye nezinye iivenkile ezibangel 'umdla zonke zibekwe kwisikwere esifanelekileyo. Ukuba utyelela ehlotyeni kukho imarike yamafama qho ngoLwesine ngokuhlwa kwaye iqela lentsapho lidlala rhoqo ngoLwesine ngokuhlwa ngoJuni nangoJulayi. Kukho nenkqubo yokwabelana ngebhayisekile.
Kukho iivenkile ezininzi kwi-Square kunye nezinye iindawo zedolophu. Kukho ibala legalufu eliziimayile eziyi- kumzantsi womnyango wakho. Le yeyona ndlela ikufutshane yokufikelela kwinkqubo ye-Lehigh Portland Trail. Kukho indlela eya kuMlambo iNeosho malunga nesiqingatha seemayile entshona yedolophu kumzantsi wendlela eya kwindawo yentlanzi, ukufota okanye ukutsiba amatye.
Ndiyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu. Ndiyakuvuyela ukukucebisa ngayo nantoni na enokwenza nokunyuka intaba, ukuhamba ngebhayisekile, ukuzonwabisa, ukuthenga, iivenkile zokutyela, iidolophu ezikufutshane njl.